म:म धेरै खानुहुन्छ ? सतर्क रहनुहोस हुन सक्छ यस्तो – Dainik Sangalo
म:म धेरै खानुहुन्छ ? सतर्क रहनुहोस हुन सक्छ यस्तो
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन २८, २०७८ समय: १३:३२:०९
शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु धेरैको खाजाको रोजाई मम हुन सक्छ । हुनपनि मम नेपालीहरूमाझ लोकप्रिय खाजा बनेको छ ।छिटो मिठो भएकाले पनि मानिसहरूको रोजाईमा मम पर्ने गरेको हो । तर स्वास्थ्यको हिसाबले मम गतिलो कुरा हैन । चिकित्सकहरु भन्छन्, ‘मम धेरै खायो भने रक्तचापको समस्या हुनसक्छ ।’
Last Updated on: August 12th, 2021 at 1:32 pm